Madaxweyne Axmed Madoobe “Heshiiska Doorashadu uma baahna in cid Ansixiso” | Somalia News
Madaxweyne Axmed Madoobe “Heshiiska Doorashadu uma baahna in cid Ansixiso”
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shaaciyey in Heshiiska Doorashadu uusan ahayn sharci u baahan in Baarlamaanku Ansixiyo, wuxuu Axmed Madoobe sheegay in Heshiiska uu yahay Xalka Doorashada lagu gali doono.
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu sheegay in Heshiiskaan uu yahay Xalka kaliya ee u furan in Doorashada lagu galo sidaas awgeed hadii ay Baarlamaanku diidaan xitaa uu soconayo.
Hadalkaan oo kale waxaa horay u yiri Siyaasiyiin badan oo iyana Heshiiska ku tilmaamay Mid Dalka lagu badbaadinayay.
September 21, 2020 6:48 am
Previous articleXildhibaanada Golaha Shacabka oo heesato Labo Daran mid dooro !!!
Next articleDhimasho iyo Dhaawac Ka Dhashay Dagaal Dhexmaray Galmudug iyo Al-shabaab